Global Voices teny Malagasy » Angolà: Ankizy maro ampangaina ho manao famosaviana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 28 Jolay 2018 17:22 GMT 1	 · Mpanoratra Clara Onofre Nandika (fr) i Samantha Deman, imanoela fifaliana
Sokajy: Angola, Mediam-bahoaka, Tanora, Zon'olombelona
Nivadi-po tamin'ny tantara mahatsiravina vao haingana momba ny zaza ariana, tsy karakaraina tsara, ampijaliana ary vonoina satria ampangaina ho manao famosaviana i Angolà. Tao amin'ny monisipalin'i Sambizanga , faritr'i Luanda no nitrangan'ny iray tamin'ny ireo tranga vao haingana. Araka ny gazety iray any an-toerana, zaza aman-polony maro nohidiana tao anaty efitra nampirehetana afo mba handorana jindungo (karazana sakay) no novonjen'ny polisim-pirenena. Mety ho very tanana ny iray amin'izy ireo, tratran'ny halemena taoriana ratra maro vokatry ny lelan-javamaranitra. Mihevitra ireo nahavanona izany fampijaliana izany hoe manala ny ratsy ao amin'ny vatan'ireo zaza voagejan'ny demony ireo fomba ireo.
Malaza eo anivon'ireo mpikambana ao amin'ny sekta sasany  ireo fomba ireo [amin'ny teny anglisy], izay ny ankamaroany, tsy ara-dalàna avokoa. Noho ny fivavahana, haratsian-tsaina, tsy fahaizana, na noho ny faniriana hanafoana ny vava mila vokisana tsotra izao, tomponandraikitra voalohany amin'ireo fihetsika ireo ny mpikambana ao anatin'ny fianakaviana. Amin'ny finoana ny famosaviana, miampanga ireo zanany, zanaka lahin'ny anadahy/anabaviny sy ny zana-bady amin'ny fijaliana mahaketraka izy ireo vantany vao misy zavatra tsy manjary ao an-tokantranony.
Manabaribary ny iray amin'ireo tranga mampalahelo ireo ny blaogy Angola Saudades  [amin'ny teny paortiogey]:
Nampiako tranga iray hafa ny blaogy Noticias Cristas  [amin'ny teny paortiogey]:
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/07/28/123353/
 sekta sasany: http://africa.reuters.com/top/news/usnJOE4AI0V8.html
 Noticias Cristas: http://noticiascristas.blogspot.com/2008/01/igreja-catlica-em-angola-recupera.html